Xayawaan (; ) waa noole ka mid ah noocyada noolaha. erayga "xayawaan" wuxuu ka yimid Af Carbeedka, dhiggiisa Af soomaaligana waa "bahal". Bahalladu wey kala duwanyihiin. Qaarkood waxay ku noolyihiin dhulka dushiisa, qaarna waxay ku noolyihiin badaha iyo wabiyada. Jaad ka mid ah bahallada waxay awoodaan in ay ku noolaadaan bad iyo berriba, sida raxa (halkani bad waxaan ula jeednaa biyaha).